"Ukudityaniswa", into entsha evela kuCarlos del Amor | Uncwadi lwangoku
«Ukudityaniswa», into entsha evela kuCarlos del Amor
UCarmen Guillen | | iintlobo, Iincwadi, Iincwadi, Inoveli
Okulandelayo Matshi 21 iya kupapashwa kwi Inqaku lomhleli uEpasa Inoveli entsha yentatheli kunye nombhali UCarlos wothando. Isihloko sayo sisinika umkhondo omkhulu wento esinokuyifumana kuyo: "Ukuhlanganisa". Eli ligama lesifo esixhwilwe ngumlinganiswa ophambili, umfana oselula, othe emva kwesigigaba esididayo ebomini bakhe, watyelela ugqirha. Ukuchongwa kwesifo sakhe uthi into ayihluphekayo "kukudideka", uhlobo lokuchasana nenkumbulo: xa ingqondo yakho ingazigcini iinkumbulo, iyazenza. Uhlala njani kanti awazi ukuba kwenzeka ntoni kanye kanye kuwe?
«Inkcubeko» ngale noveli kunye nombhali wayo oku kulandelayo: «I-Del Amor ayinomdla kwimisebenzi emikhulu, kodwa kwiimpawu ezincinci, i-cataclysms yobudlelwane obusondeleyo. Uhamba njengentlanzi emanzini xa exela ukuphanziswa, ukuphoxeka ».
UAndrés Paraíso, umhleli ophumeleleyo, ufumanisa into ethile edidayo ebomini bakhe emva kohambo lomsebenzi. Ubulele umntu, umhlobo ongumlobi, kodwa okumangalisayo kukuba akukho mntu ungqinayo ngalo msitho. Phakathi kokuthandabuza nokungaqiniseki, uAndrés ujikeleza kule meko kangangoko anako. Ayisiyiyo kuphela isiganeko esibi ekufuneka ujongane naso. Ukutyelela ugqirha kuqinisekisa ukuba unesifo esinqabileyo: iyelenqe. Luhlobo lokuchasana nenkumbulo: xa ingqondo ingazigcini iinkumbulo, iyazenza. Ngale ndlela, ubunyani kunye neentsomi ziyinto enye noAndrés.
Uchazwe kumntu wokuqala, Ukusebenzisana Ihambisa kuthi ukuphanziswa komlinganiswa ofumanisa ukuba ubomi bakhe - ubomi acinga ukuba ubuphile- bunokuba yingcinga okanye, kwiimeko ezilungileyo, umxube wenyani kunye nobuxoki. Ukusuka apho, uCarlos del Amor uphakamisa umdlalo onobuqili, phakathi kwengqondo kunye nokubalisa: ngaba singayithemba into asixelela yona uAndrés? Yintoni inyani kwaye yintoni into eyiliweyo kwibali lakhe?
UDel Amor usimema ukuba sicingisise ngokubaluleka kweenkumbulo kulwakhiwo lwangoku. Wenza oko ngokwamaxwebhu aqinileyo- zonke iinguqulelo zememori ezivela kwinoveli ziyinyani- kwaye ukusuka ekuqondeni okunzulu kwendlela ethe-ethe yomphefumlo womntu. Isizungu, ukuphoxeka kunye nokuthandabuza kulukwa libali apho kuvela isigqebelo - ngamanye amaxesha njengokuhlaba okuthile - xa ujongene noncwadi, usapho, ubuhlobo, ubudlelwane nomtshato.
Ukufunda nje isishwankathelo kundenze ndafuna ukuyifunda. Kuluhlu lwam olude lweencwadi ezilindileyo, le ibhalwe ngumbhali UCarlos wothando, owaqala ukubangumbhali ngo-2013 ngencwadi yamabali amafutshane enesihloko "Ubomi ngamanye amaxesha", yeyiphi eyayiza kulandela "Unyaka ngaphandle kwehlobo" (2015)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » «Ukudityaniswa», into entsha evela kuCarlos del Amor
Imvelaphi yoncwadi lobuhle kunye nerhamncwa
Iincwadi zabantwana ezi-6 zeefomathi ezahlukeneyo zalo naluphi na ufundo.